Global Voices teny Malagasy · admin – Novambra 2017
admin · Novambra, 2017
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Novambra, 2017
Miahiahy Momba Ny Kabinetran'ny Filoha Vaovao Ireo Bilaogera Iraniana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana18 Novambra 2017
Manoratra i S'can-Iranic fa mpikambana ao amin'ny Fikambanana Revolisionera Islamika na miara-miasa akaiky amin'izany ny ankamaroan'ireo olona notendren'ny filoha Ahmadinejad ao amin'ny kabinetrany.
Bitsibitsika Afghana: Lesona Hampianarina & Hianarana
Azia Afovoany sy Kaokazy17 Novambra 2017
Mahaliana fa mahita ireo firenena vahiny tahaka an'i Iran sy Iraka ireo bilaogera Afgana ary miezaka mianatra sy mampianatra lesona momba ny fandriampahalemana sy ny hafaliana.
Krizy Nokleary ao Iran, Ireo Nosy Ao Amin'ny Helodrano Persiana ary Fanampiana Ara-bola Ho An'i Palestina
Nivory ireo mpikambana maharitra ao amin'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana sy Alemaina mba hiresaka momba ny hetsika iraisan'izy ireo manohitra an'i Iran ary lohahevitra mafàna ao amin'ny fampahalalam-baovao sy bilaogy Iraniana ilay antsoina hoe "krizy nokleary".
Bitsibitsika Afghana: Resaka Mojahidinina, Parlemanta & Media
Azia Afovoany sy Kaokazy14 Novambra 2017
Araka ny filazan'ny Yadashtayi az Gharb (fanamarihana avy any Andrefana), niresaka momba ny Mujahedeens tamin'ny fomba ratsy teo anoloan'ny solontenan'ny Mujahedeens sy ny hafa tao amin'ny Parlemanta Afghana (Loya Jigra) Ramatoa Malai Joya.
Bitsibitsiky ny Afghana: Fianjerana Fiaramanidina & Fitroarana
Azia Afovoany sy Kaokazy10 Novambra 2017
Araka ny filazan'ny haino aman-jery herinandro lasa teo izay, niparitaka manerana ny renivohitra ny fihetsiketsehana mahery setra manohitra ny vahiny tamin'ny Alatsinainy rehefa nandòna fiara maromaro ny kamiao miaramila Amerikana. Andeha hojerentsika izay lazain'ny bilaogera momba ity zava-nitranga ity.
Mpanao Gazety Tratran'ny Fanerena & Krizy Nokleary
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana10 Novambra 2017
Nilaza i Saminejad’, mpisolovava sady bilaogera voafonja fa nolavin'ny fitsarana ny fampakaran'izy ireo ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ary tokony higadra mandritra ny folo volana izy. Namoaka izany vaovao izany ny ISNA, Sampan-draharaham-pirenen'ny Mpianatra Iraniana.
Bilaogy Afghanistana: Gazety, Zaher Shah & Talibana
Eoropa Afovoany & Atsinanana10 Novambra 2017
Garderah, bilaogera Afghana izay nitsidika an'i Afghanistan vao haingana, nanoratra fa maro ny Afghana gaga amin'ny hamaroan'ny isan'ny gazety, radio, fahitalavitra tsy miankina izay miara-miasa amin'ny governemanta.
Hibilaogy i Khatam, Fiaramanidina Nianjera & Niharam-boina, Mofo & Fahalalahana!
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Novambra 2017
Araka ny filazan'i Zannevesht, vehivavy Iraniana bilaogera sady mpanao gazety, nanapa-kevitra hibilaogy amin'ny faran'ity herinandro ity ny filoha teo aloha Khatami.
Bilaogy Afghanistana: Mpanao Tononkalo Namoy ny Ainy, Herisetra & Fanafahana
Eoropa Afovoany & Atsinanana08 Novambra 2017
Mpanao tononkalo novonoin'ny vadiny, herisetra & fanafahana ny Olom-pirenena Kabul no resahan'ireo bilaogy.
Filipina: Manome Voninahitra Ho An'ireo Maty Any Am-pasana
Azia Atsinanana08 Novambra 2017
Mankalaza ny 1 Novambra ho andro hanajana ny olo-masina sy ny maty ny ankamaroan'ireo Filipiana Katolika . Satria maro amin'ireo Filipiana no mitsidika ireo hava-tiana efa maty any am-pasana, andro tsy fiasàna ao Filipina ny 1 Novambra.